Shiinaha HTD-610S Dabaqa Soccer Outlet warshad iyo saarayaasha | Feilifu
Xiritaanka caaga IP66
IP55 Beddelka & Jeebka
Shell (w / o Qalabka)
Beddelashoo & Saldhigyo
IP66 Beddelka & Saldhigyada
Beddelka & Saldhigyada cusub ee IP66
Fur Nooca Daboolka
Nooca 45 Qalabka Shaqada
Nooca 128 Qalabka Shaqada
Nooca 118 Sockets
Nooca 50 Module
Nooca 32 Module
AD2GEE IP66 Xiritaan madhan
ADL-01SR Qalabka Socket-ka Jarmalka
IP55 Taxanaha Switch oogada Biyuhu + BS godka + Sch ...
IP66 Xiritaannada Madhan
FZ528 Miiska Meelka
FZ502 Miiska Meelka
HTD-610S Dabaqa Saldhigga Dabaqa
Halbeeg aasaasiga ah:
Cabbirka guddiga: d) 115mm
Cabbirka salka salka: 125x125x75mm
Noo soo dir emailU soo degso sidii PDF
Qaab dhismeedka aasaasiga ah
FURASHADA NOOCA SHAQA NOOCA SARE
FURASHADA FURAN (FLATOPEN)
Furaha furan ee furan: NK
Furaha furan ee furan: NK Guddi iyo dabool is barbar dhig Ammaan badan
Naqshadeynta qormada ee looxyada, daboolka kore ayaa is barbar socda dabaqa (180 °) marka la furayo. Waxaa loo isticmaali karaa godka bareesada gaarka ah ama fiilooyin badan isla waqti isku mid ah. Waxay ka fogaan kartaa hoos u dhaca daboolka markaad qaadaneyso awoodda (macluumaadka), taas oo hagaajinaysa amniga sheyga inta lagu jiro isticmaalka.
Jaantusku wuxuu qaadaa HTD-180 nooca daboolka furan ee godka tusaale ahaan. Ma jiro tilmaamo dheeri ah oo loogu talagalay alaabooyinka kale sida jaantuska shaxanka oo la mid ah sheyga.
Badeecadan taxanaha ah waxaa loo isticmaalaa nooca daboolka furan ee godka sagxada HTD-120, HTD-140, HTD-180 、 HTD-210.
HTD-2242 、 HTD-2702 、 HTD-3402 、 HTD-300
Dekedda Difaaca Dekedda 'outlet outlet' waxaa loo isticmaalaa daboolka nooca godka dabaqa ah
Hagaajinta Oulet cable dK HK hagaajinta xarigga fiilada Waxyaabaha: naxaas Waxyaabaha: ahama Naqshad qurxoon oo fudud dekedda laga baxo
Dekedda ilaalinta outletIyada oo daloolka weyn ee heerkiisu sarreeyo, marka aan la qaadanayn awoodda (macluumaadka), dekedda ka baxda (wajiga) ayaa si siman ula socota dayaaradda off1 oor socket. Inta lagu guda jiro isticmaalka, dekedda dibedda (gadaal) waxay u horseedi kartaa fiilo fara badan & silig ka soo baxa godka dhulka & si wax ku ool ah uga ilaaliya maqaarka fiilada siligga waxyeellada.
Ka bixitaanka HK Cable Ma jiro tilmaamo dheeri ah oo loogu talagalay alaabooyinka kale sida jaantusyada qaabdhismeedka ar
HTD-610S (3 module module, TUV, CE ansixinta)
Hore: XK-250 Saldhigga Dabaqa
Xiga: FZ501 Miiska Meelka
Dekedda ilaalinta outlet
Iyada oo daloolka weyn ee heerkiisu sarreeyo, marka aan la qaadanayn awoodda (macluumaadka), dekedda ka baxda (wajiga) ayaa si siman ula socota dayaaradda off1 oor socket. Inta lagu guda jiro isticmaalka, dekedda dibedda (gadaal) waxay u horseedi kartaa fiilo fara badan & silig ka soo baxa godka dhulka & si wax ku ool ah uga ilaaliya maqaarka fiilada siligga waxyeellada.
Dabaqa Qarsoon ee Dabaqa
Santuuqa Soodhawaynta Dabaqa
Sanduuqa Dabaqa Dabaqa
Saldhiga Dabaqa Caaga
Saldhigyada Dabaqa aan la aqoon
HTD-16 Dabaqa Saldhigga Dabaqa
HTD-26 Dabaqa Saldhigga Dabaqa
HTD-12 Dabaqa Saldhigga Dabaqa
HTD-30 Dabaqa Saldhigga Dabaqa
HTD-120K Furan Nooca Daboolka Dabaqa
HTD-2 Dabaqa Saldhigga Dabaqa
Telefoonka: 0086- (0) 577-62797750 / 60/80
Fakis: 0086- (0) 577-62797770
Tilmaamaha Buuxda ee Qiimeynta IP-Biyo La'aanta - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7 Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay alaab ay ku qoran yihiin calaamado dusha ka saaran ama ay ku jiraan baakidhkooda, sida IP44, IP54, IP55 ama kuwa la mid ah. Laakiin miyaad ogtahay waxa macnahoodu yahay? Hagaag, tani waa koodh caalami ah ...
Dhammaanteen waxaynu aragnaa tixraacyada aaladaha aan biyuhu karin, aaladaha u adkaysta biyaha iyo aaladaha biyaha celiya ee lagu tuurayo alaabada elektaroonigga ah. Su’aasha ugu weyn ayaa ah: Waa maxay farqiga u dhexeeya? Waxaa jira maqaallo badan oo ku qoran mowduucan, laakiin waxaan is tusnay inaan tuuri doonno labadayada sante sidoo kale ta ...
Waa Maxay Gogosha Dabaqa? Godka sagxadda dhulku waa qaboojiye fur oo ku yaal dabaqa. Noocyada noocan ah waxaa loo samayn karaa fiilooyin fara badan oo kala duwan, laakiin badanaa waxaa loo isticmaalaa isku xidhka korontada, taleefanka, ama fiilooyinka. Isticmaalka saldhigyada dhulka waxaa si aad ah loogu nidaamiyaa xeerarka dhismaha dad badan ayaa ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-20122: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.